धरान । इटहरी निवासी लिलम वस्नेत १ नम्बर प्रदेशको सांसद हुन् । राजनीति,सामाजिक सेवा र जनमुखी भावानाकै कारणले सांसद वस्नेत प्रदेश सांसद हुन सफल भएका छन् । उनी इटहरीमा जनप्रिय,इमान्दार,निष्ठावान र निडर नेताको रुपमा मात्रै होइन सफल उद्योगीको रुपमा लोकप्रिय छन् । उनी हाल मदन भण्डारी फाण्डेशन १ नम्बर प्रदेशको सदस्य समेत छन् ।
यसअघि उनी उद्योग वाणिज्य संघ १ नम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी पुर्व अध्यक्ष एवम् सुनसरीको विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध छन् । उनै सांसद वस्नेतसँग औजार दैनिकले गरेको कुराकानी :–
१. दिनचर्या कसरी बित्दैछ,छोटकरीमा बताईदिनुस् न ।
:– अहिले विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोभिड –१९ को महामारी चलिरहेको छ । मेरो क्षेत्र औधोगिक क्षेत्र पनि पर्ने भएकोले उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहका जुन मजदुर साथीहरु छन् । उनीहरुलाई कसरी सहज वातावरण बनाईदिने भन्ने बिषयहरुमै छलफल गरिरहेका छौ । हामीले उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं।
तर पुर्णरुपमा उत्पादन भईरहेको छैन । त्यै पनि सामान्यतय उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने सामानहरु गईरहेका छन । त्यसको निमित्त हामीले अब मजदुर साथीहरु अथवा त्यहाँका सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसङ्ग छलफल गरेर कोभिड –१९ को संक्रमण नहोस् भनेर सामाजिक दुरी कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छौ । ईटहरिमा हिजो हामीले आईसोलेसनको विधिवत रुपमा चावी हस्तान्तरण गरियो । हिजोदेखि आईसोलेसन तयार भयो । यस्तै बिकास निर्माणका कार्यहरु सामाजिक दुरि कायम गरेर कामहरु गरिरहेका छौ ।
२.सरकारले सुनसरी र मोरङलाई बिशेष कोरोना जोखिम क्षेत्र भनेर २१ दिने अभियान चलाउने भनेको छ, यो भनेको वास्तवमा के हो र कसरी चल्छ बताईदिनुस न ?
:– हामीले यसलाई सामाजिक दुरि कायम राखेर प्रदेश सरकारले २१ दिने अभियान चलाएको छ । अब यो कस्तो हो भने पिसिआर मात्र टेस्ट गर्नु भन्दा यसलाई थोरै घटाएर दुरसङक्रमित भएको व्यक्तिलाई मात्र पिसिआर गर्ने र अहिले पिसिआर पनि प्रदेश सरकारले धरान,बिराटनगर र झापाको मेची अस्पताल गरेर ४,५ ठाउँमा गरिरहेको छ । पिसिआर गर्न सरकारलाई पनि आर्थिक बोझ भएको कारणले अबका दिनमा जो संक्रमित भएको व्यक्ति छ। उसैलाई मात्रै हामीले पिसिआर गर्न र जनजीवनलाई पनि सामान्य रुपमा ल्याउनका निमित्त प्रदेश सरकारले जस्तै यातायातका कुराहरु भए उद्योगका कुराहरु भए होटलहरु अब बिस्तारै –बिस्तारै पुर्ण रुपमा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
३. कोरोनाको सक्रमण वढ्दै छ , नियन्त्रण भएको छैन त ?
:– यो जोखिम कस्तो हो भने एउटा भाईरल हो अब यसले के छ भने काम गरि खाने मजदुर साथीहरुलाई उद्योगहरु खोल्ने उद्योगीहरुलाई आज ठूलो मारमा पारेको छ । अब हामीले कोभिडको डर र त्रासले मात्रै ती कुराहरुलाई गरेनौ भने भोलिका दिनमा देश आर्थिक रुपले पूरा क्षति ग्रस्त हुन्छ ।
देशले समृद्व नेपाल र सुखी नेपालको जुन नारा लिएको थिया, त्यो त भोलि कहाँ पुग्छ ? त्यसैकारण अब हामीले कोरोनाबाट बाँच्दै अरुलाई अरुलाई पनि बचाउँदै अब हामीले हाम्रो दैनिकी पुनःसुचारु गर्न उचित हुनेछ । व्यवसाय व्यवसायी सबैले सजग भएर काम गर्न जरुरी छ ।
४. यसले महामारी रुप लिने सम्भावना बढेको छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार कत्तिको गम्भीर छ ?
:– प्रदेश सरकार यसतर्फ धेरै चनाखो र गम्भीर छ ।
यो कोभिड– १९ प्रती सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्दै आएको छ । स्थानीय तहसङ्ग पनि समन्वय गरेर र आज तपाईहरुलाई हरेक स्थानिय तहहरुमा आइसुलेसनको व्यवस्थित गरेर सङक्रमित व्यक्तिहरु अलिकत्ती अप्ठ्यारो अवस्था भयो भने भेन्टिलेटर र अक्सिजन चाहिने त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई अस्पताल धरान विपि,कोशी अन्चल अस्पताल र बिराटनगरमा यो सरुवा रोग सम्बन्धी उपचार गर्ने वातावरण बनाएको छ ।
अस्पतालमा उपचारको रुपमा लाने र सङ्गै हामीले कोरोना सङ्ग लड्दै पनि जाने म आम जनतालाई सन्देश दिन चाहान्छु ।
५. अब भनेपछी सर्वसाधारणको जनजिवन खोकुलो हुन्छ ?
:– बिस्तारै बिस्तारै खोकुलो गर्दै लैजानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
६.सरकारले पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि वेवास्ता ग¥यो भन्ने आरोप छ ?
:– यो सरकारलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न स्वभाविक हो । अझ तपाईं बिदेशमा हेर्नुस् जस्तै अमेरिका जापानतिर अहिले लकडाउन पनि छैन । दक्षिण कोरियातिर त अब कुनैपनि भावना नै छैन ।सङ्क्रमित हुदैछ,उपचार पनि हुदंैछ । तर सबै कुराहरु सन्चालन भएका छन् । आज जापान अमेरिकामा लकडाउन भएन । अमेरिकामा त झन सुरु सुरुमा त मास्क पनि लगाएनन् भन्ने सुनिएको छ ।
तर हाम्रो नेपालमा के छ भने कोरोना संक्रमित हुँदै गर्दाको अवस्थामा कोठाभित्र बस्दा पनि जनजिवन ग्रसित रह्यो । विभिन्न घटनाहरु घटे ।
अझै लकडाउन गरे अब के हुन्छ अवस्था आफै भन्नुहोस् त ? त्यसैले यसलाई सामान्य रुपमा र एकैचोटि नभएर क्रमशः क्रमश रुपमा खुकुलो पार्दै गएर हामीले कोरोनालाई जित्नुपर्छ ।यसबाट बिजय हुनुपर्छ । त्यो नै उचित उपाय हुनेछ ।
७. जनताको गुनासाहरु पनि छन्, प्रदेश सरकार सुस्त भयो अनि गति लिन सकेन भन्ने पनि छन् ?
:– यस्तो छ ,अब हामी अहिले तीन तहको सरकारमा छौ । संविधान कार्यान्वयन पक्षमा छौ । भर्खर २०७२ को संविधान जारी भएको ५ बर्ष पुगेको छ । अब सबैभन्दा चलायमान र अचलायमान हुनमा कहाँ अन्तर छ । नेतृत्वको हिसाबले भन्नुपर्दा सार्है कुशल नेतृत्व हुनुहुन्छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री ज्यु । उहाँ ईमान्दारिका साथ १ न प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउन लाग्नुभएको छ ।
अब त्यो गर्छु भन्दैमा कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र जुन हामीले शासकिय स्वरुप यस बर्ष भित्रमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा थियो ! तर कोरोनाको कारणले गर्दा अलिक महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण बिधेयकहरु लिएर त्यसलाई ऐन बनाउनमा सरकार ध्यानकेन्द्रीत भयो ।
सबैभन्दा ठूलो सरकार सन्चालन हुनलाई ऐन,कानुन र शासकिय स्वरुप जस्तो कर्मचारीहरुको कुरा पनि अलिकत्ती नगएको कारणले यावत कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णयहरुलाई अगाडि बढायो तर बिकाश निर्माण पुर्वाधारको कुरामा जनता अथवा आम नागरिकले सोचेभन्दा ज्यादा भएको छ । त्यसमा हामी गर्वम्वित हुनपर्छ ।प्रदेश सरकार ¥यापिड स्पीडमा छ ।
८. त्यसो भए अहिले सम्म प्रदेश सरकारले गरेको महत्वपुर्ण काम चाहिँ के हो त ?
:– मुख्यमन्त्री ज्युले आफै उद्घोष गर्नुभएको छ । हिनाघाट देखि लिएर बिराटचौक बिराटनगर हुदै राजधानी जोड्ने ,राजधानीको बिषयमा बिराटनगर ईटहरी, शुन्दरहरैचामध्येमा हामीले कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका राख्ने भनिएको छ ।
तर अहिले हामीले बिराटनगरमा हिजो अस्ति शिलान्यास भएको छ । त्यो टेम्पोररी तरिकाले तत्काल प्रदेशका सांसदहरुलाई कमसेकम एउटा प्रदेश सभाहलको चै सुरुवात भएको छ । ईटहरी अथवा बिराटनगर जहाँ हुन्छ। जहाँ आम नागरिकहरुलाई पहुँच पुग्ने खालको वातावरण छ,त्यहाँ भोलिको दिनमा कार्यपालिकाको पनि व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
९.नेकपाको सचिवालय बैठकमा चारबुद्वे प्रस्तावसहित मन्त्री हेरफेर गर्ने भनिएको छ र प्रदेश न १ को पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ ?
:– हैन, त्यस्तो किसिमको परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण के हो ? हिजो हामीले दलको नेतामा छानेको मुख्यमन्त्री उहाँलाई हामीले ५ बर्षको लागि माईन्डेड दिएका छौ । अब यहा कसैको इच्छा आकाङ्कक्षाले मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सरकार निर्णय यी कुराहरु भनेको के हो भने फाल्टो कुराहरु हुन् । तर सम्भावना छैन भन्न खोजेको हैन तर के कारणले मुख्ख्मन्त्री फेर्नपर्ने हो ? त्यो मेरो प्रश्न हो । हाम्रो देशमा अलिकत्ति भागबण्डा र आफ्ना सम्बन्धका कारणले पनि यी कुराहरु अक्सर आउने गर्छ । म त भन्छु कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा सबैभन्दा सफल मुख्यमन्त्री चै हामी एक नम्बर प्रदेशकै हो भनेर सोचेका छौ र उहाँले जुन रप्mतारमा काम गर्नुभएको छ,त्यो प्रङ्शानीय पनि छ । प्रदेश सरकारलाई आज उहाँले भन्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी केही आएमा १ मिनेटभित्र कार्वाही गर्छु भनेर उहाँले हेल्प डेस्क पनि खोल्नुभएको छ । उहाँले यस्तो भ्रष्टचार बिरुद्व होस् या शु–साशनको बिरुद्व होस् र अहिलेको कोभिड –१९ को कुरामा होस् । उहाँको सधै गम्भीर हुनुहुन्छ ।
१०. अन्त्यमा खासगरी नेकपा एकीकरण भएपछि अहिले नाम मात्रैको नेकपा छ । व्यक्ती हावी भएको देखिन्छ । गुट उपगुट चाप्लुसी लगायतको प्रवृतीले गर्दाखेरी नेकपा अब कमजोर भएको भन्ने कुरा छ नि ?
:– राजनितिमा हिजो हामी सरकारमा थिएनौ । २०१४ सालको निर्वाचनमा हामीले मत हासिल गर्यो । राजनिती भन्ने कस्तो चिज हो भने एकछिनको बिवादले तुरुन्तै सकिने चिज हैन । दुई ठुल ठुला संगठन पार्टीहरु एकिकरण भएका छन । यसलाई सक्रमणको बेला भनिन्छ । यो संक्रमणको बेला हामी आत्तिन हुँदैन ।
मुख्य कुरा गुटउपगुट को कारणले आज पार्टीलाइ नोक्सान गरेको छ । हामी नितान्त पार्टीका विधि बिधान पार्टीगत प्रक्रियामा चलाउनु पर्नेमा पार्टीका साथीहरुले विभिन्न नामका एन्जिओ लादेर संगठनलाई थप कमजोर बनाउने कोशिसहरु गरिरहेका छन । म सुन्दैछु पुर्बेली समाज भन्ने एउटा छ अरे खै कुन नेताले ल्याउनुभाको हो ? त्यो थाहा छैन यसरी एउटा जिउँदो पाटी हुँदा हुँदै त्यो पाटीको पछाडी विभिन्न नामाकरण गरेको तुक बिनाको चिज लिएर आएर पार्टीलाई दह्रो बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई दह्रो बनाउने नियतले दलका नेताहरु लागिरहेका छन ।
म त मेरो नेताहरुलाई भन्छु पार्टीलाई दह्रो बनाईयो भने हामी आगामी जस्तोसुकै निर्वाचनमा पनो दह्रो हुन्छौ । पार्टी एकता र पाटी विधि बिधान र व्यक्तिलाई हावी हुन दिनु भएन । त्यो नै हाम्रो लागि र पार्टीको लागि फाईदाजनक हुनेछ । सधै पार्टीको निर्णयलाई सिरोधारा गरेर अगाडि बढ्नपर्छ ।